म विदेशीन वाध्य छु - Sano Aawaj
(देशमा केहि गर्छु मलाई केहि रिण देउ भन्दा नमानेको बैङ्कले विदेश जान लागेको भन्दा कति चाहियो रिण रे !देशको विडम्बना..!)
समयले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँदो रहेछ । सोचेका हरेक कुरा कता छुटे कता, अब त सम्झना पनि रहेन । फूल जस्तो जिन्दगीको कल्पनामा हराउँदा हराउँदै थाकियो । हरेक पाइलामा काँडामाथि टेकेर हिँड्नुपर्दाको पीडा म कसरी लेखूँ यी शब्दहरुमा ।
अब त मुटुभरी पीडा बोकेर मुस्कुराउनु मेरो नियति बनेको छ । समयले यो बालुवाको सहर काठमाडौंमा पछारेको पनि हेर्दाहेर्दै चार वर्ष पुगेछ । न कुनै प्रगतिको पहाड बनाउन सकियो न चित्त बुझाउन सकियो, हेर्नेको आँखामा जिन्दगी फूलजस्तो देखिन्छ तर देखिँदैन भित्री मनको काँडा जिन्दगीको तीतो यथार्थ ।
गरिबको जिन्दगीमाथि समयले पनि कस्तो खेल खेल्दोरहेछ । एक फाको हाँसोका लागि तड्पिनुपर्ने है।
नेपालमा नै केहि रोजगारी पाइएला भनेर सकि नसकि घरबाट रिण काटेर भएपनि पत्रकारितामा कक्षा १२ पास गरियो तर नेपालमा त राम्रो जागिर खान पनि आफ्नै मान्छे चाहिदो रहेछ। यता उति जागिरको लागि भौतारिदा कतै जागिर नपाए र म होटलमा भाडा माझ्न बाध्य भए, हुन त काम सानो र ठुलो हुदैन तर पनि आफुले पढेको र सोचेको जागिर नपाए पछि भने मन बाटै नेपालमा बसेर नेपलको प्रगति गर्छु भन्ने धारणा हरायो।
काम गर्दै गए काम सिक्दै गए आफ्नो रहर भने कपिमा कलम चाउँने थियो तर बिडम्बना नेपाल सरकार लाई दोष दिउ या आफैलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा कतै आफ्नो मान्छे नभएर कतै काम पाउन सकिन।
नेपालमा हजारौं युवाहरु आफुले भने जस्तो जागिर नपाएर नै विदेशिन बाध्य भएका छन। रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्रमा वृद्धि होस् भन्ने अपेक्षा गर्नु भन्दा पनि आफ्नै देशमा केही सानो व्यवसाय भए पनि गर्न सक्ने वातावरण युवाका लागि बनाउनु पर्छ नेपाल सरकार। केहि गर्छु भन्नेहरुका लागि पनि केहि गर्न वातावरण छैन त्यसै ले लाखौ युवा विदेशीमा गएर आफ्नो पसिना बेच्न बाध्य भएका छन।
त्यस्तैं म पनि देशका लागि केहि गरौ भन्ने धारणा बोकेर अघि बढे पनि नेपालमा बसेर मैले मेरो भविष्य उज्वल नदेखेका कारण विदेशिन बाध्य भएको छु, देशमा केहि गर्छु मलाई केहि रिण देउ भन्दा नमानेको बैङ्कले विदेश जान लागेको भन्दा कति चाहियो रिण रे.. देशको विडम्बना।
देशका युवाहरु सबै विदेशमा गएर श्रम र शिप बेच्न अवस्था भए पछि देशमा विकास कहाँ हुन्छ त.. ? देशमा विकास गर्ने को हुन्छन त.. ? युवाजति सबै खाडि गए पछि देशमा भएका बच्चा र बुढाहरुले के गर्न सक्छन त.. ?
‘स्वदेशमै बसेर, यहींबाट इकोनमीको ग्रोथ हुँदा हामी सबैलाई र देशकै लागि राम्रो हुन्छ ।’ त्यसैले नेपाल सरकार देशका युवाहरु लाई रोजगारीको सिर्जना गरुनु आवश्यक छ।
Posted in Breaking news 1, breaking news 3, Nepse Update, ताजा अपडेट, रोचक खबर, लेख /रचना, व्यक्तित्व
Prev११ वर्षीय बालकको करणी पछि ….
Nextराज्यसँग चामल माग्न हुम्लाबाट काठमाडौंतिर